!!! ဒီမိုလစ်ဘရယ် မွတ်ကုလားအောက်ဆွဲ ဒေါင်း စွမ်းအားရှင်လို့ပြောရင်လည်း မကြိုက်ကြ ။ သောက်ကျင့်တွေကျတော့လည်း ယုံမှတ်လိုက်တာနဲ့ ခွေးတွေ ခြေသလုံး ကို နောက်က ဝင်ဆွဲသလို အလစ် ချောင်းမြောင်းပြီး ပြည်သူတွေ ကို အစိုးရထံ ဖိအားပေးရာမှာ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် အသုံးချဖို့ပဲလုပ်ကြံနေ ကြတယ် ။ | democracy for burma
tags: alert, Arakan, Bengali, Burma, CODE 702, CODE 914, Islam, MOSLEMS, Myanmar, National Identity, Rakhine State
ဒီမိုလစ်ဘရယ် မွတ်ကုလားအောက်ဆွဲ ဒေါင်း စွမ်းအားရှင်လို့ပြောရင်လည်း
မကြိုက်ကြ ။ သောက်ကျင့်တွေကျတော့လည်း ယုံမှတ်လိုက်တာနဲ့ ခွေးတွေ
ခြေသလုံး ကို နောက်က ဝင်ဆွဲသလို အလစ် ချောင်းမြောင်းပြီး ပြည်သူတွေ
ကို အစိုးရထံ ဖိအားပေးရာမှာ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် အသုံးချဖို့ပဲလုပ်ကြံနေ
ဆြာကြီး သဘာကြီး အထာတွေနဲ့ မွတ်ကုလားထံက သတင်းတွေကိုမျက်စိ
လှည့်ပြီးသောက်တလွဲတွေနဲ့ အစိုးရကို ချုပ်လိုက် , ပြည်သူတွေနဲ့ ရန်တိုက်
ပေးလိုက်နဲ့ ကလိမ်ကကျစ်တွေ လုပ်နေကြတယ် ။
မွတ်ကုလား မီဒီယာက မွတ်ကုလားတွေ လံကြုတ် လုပ်ထားတဲ့ စာရွက်ကြီး
ကို ရုံးစာရွက် စာတမ်းပါ ဆိုပြီး တံဆိပ်ခေါင်းမပါ , ရုံးလက်ခံ မပါ, ရုံတံဆိပ်
မပါနဲ့ဟာကို ခပ်တည်တည် နဲ့ (လဝက) ထွက်တဲ့စာရွက်လိုလိုသောက်ရှက်
မရှိ ဖွနေကြတယ် ။ ခွေးမျိုးတွေ အရိုးတွန်လာတဲ့ အခါ သိပ်သိသာတယ် ။
ကုတ်နံပါတ် ၉၁၄ , မှာ ရိုဂိန်ညာ မကလို့ ဒေါင်းဖခင်ကြီး , မွတ်ဒေါင်း , ဒီမို
ဟင်ဂျာ , ဘင်္ဂဒီမို စသဖြင့် ဖီးလ် လာသလို ထည့်လည်း ကိစ္စမရှိ။ ကြိုက်သ
လို ထည့်လို့ရတယ် ။ ၁၃၅ မှာ မပါတဲ့ ခွေးမျိုးတွေ ပါလာရင် တာဝန်ရှိသူတဲ့
သူတွေ ပယ်ဖျက်မှာ ဖြစ်သလို , လက်တစ်လုံးခြားလုပ်လျှင်လည်း ကျုပ်တို့
ပြည်သူတွေက ခွေးမျိုးတိုးမယ့် ကိစ္စ ငြိမ်ခံနေမှာ မဟုတ်ပါ ။
အဲဒီ ကုတ်နံပါတ် (၉၁၄) မှာ လက်ယားလျှင် ယား သလို ဖြည့်လို့ ရပေမယ့်၊
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်သား စာရင်း မဝင်တဲ့ ခွေးမျိုးတွေဆို သန်းခေါင်စာရင်း
ထဲ မပါတာ , ပယ်ဖျက်ခံရတာ အပြင် ဘာမှတော့ မဖြစ်ဘူး ။
ဒါကြောင့် ဆားကလောက်တွေ ပသီ , ကမန် အစရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းသားစာ
ရင်းဝင်တဲ့ မွတ်စလင်တွေကို ဖြည့်စွက်ဖို့ ညှိနေကြတာတောင်သူတို့ချင်း ပြန်
ဘင်္ဂလီက – ပသီ မဖြစ်ချင်သလို , ပသီတွေကလည်း ဘင်္ဂလီတွေဇာတ်လာ
ပြီး ညှိမှာကို မလိုလားကြဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို စာရွက်တွေဒလဟောဖြန့်
ပြီး ကုလားတွေ ကုလားအချင်းချင်း မျက်စေ့လှည့် ပြန်ကလိမ်နေကြတဲ့ ပုံစံ
ဒီမိုလစ်ဘရယ် ထမီရှူ ဒေါင်းစွမ်းအားရှင်တွေ ကလိမ်ကကျစ် သောက်ကျင့်
တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကိုနှစ်ကျပ်ကွက်သုံးပြီးအစိုးရနဲ့ ရန်တိုက်ပေးနေတာကို
မွတ်စလင်သတင်းမှာ ဒီလိုဖော်ပြထားတယ် ။
← BURMA MYANMAR: COMRADE AUNG GYI(GSC) SLAUGHTERED BY RADICAL ISLAMISTS IN MALAYSIA
สภาพบ้านของยายเฒ่าชาวนาอายุ 81 ปี เหยื่อเซ่นโครงการรับจำนำข้าว……. →